Nhau - 5 kiyi yePeru mhangura yekutsvaga zvirongwa
dth Kuchera Rig
Inotakurika Mhepo Compressor
Mira Mhepo Compressor
Mvura Well Drilling Rig
Solar murwi ramming rig
Dth ekuchera maturusi
DTH Nyundo Bit
Nenyunje Hole Drill Pipe
Mvura Tsime Drill Pipe
yakawandisa casing system
Eccentric (ODEX) Casing Sisitimu
rc kudhiraini maturusi
Reverse Kutenderera Nyundo
Reverse Kutenderera Nyundo Bit
Reverse Kutenderera (RC) Drill Rod
Pamusoro Hammer Rock Zvishandiso
Yakagadziriswa Dombo Zvishandiso
Taper Dombo Zvishandiso
michina yekuchera maturusi
Michina Drill Pipe
Ndokugadzira Drill Rod
Kukwesheswa Welding Drill Rod
Wireline Drill Zvishandiso
Mvura Yakanaka & Geothermal
Kubatsira uye HDD
Solar Murwi Ramming
5 kiyi yePeru yekutsvagisa mhangura zvirongwa
Peru, yechipiri inogadzira mhangura munyika, ine purojekiti yemakumi matanhatu emabasa ekutsvaga kwemigodhi, ayo gumi nemana ari emhangura.
BNamericas inopa pfupiso yemapurojekiti mashanu emhangura akakosha, izvo zvinoda kudyidzana kwakabatana kweUS $ 120mn.
Iyi US $ 45.5mn greenfield chirongwa muMoquegua, anenge 40km kumaodzanyemba kweArequipa, inoshandiswa naMinera Pampa del Cobre. Chimbo chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza chakatenderwa, asi kambani haina kukumbira mvumo yekutsvaga. Iyo kambani inoronga pamusoro pemadhaimani kuchera.
Camino Resources ndiye anoshanda weiri US $ 41.3mn greenfield chirongwa mudunhu reCaravelí, mudunhu reArequipa.
Izvozvi zvinangwa zvikuru ndezvekutarisa uye kuongorora kweiyo geological kwenzvimbo yekufungidzira nekusimbisa zvicherwa, uchishandisa pamusoro penzvimbo yedhaimani.
Zvinoenderana neBNamericas mapurojekiti dhatabhesi, kuchera kwedhaimani kweDCH-066 tsime kwakatanga munaGumiguru wapfuura uye ndiyo yekutanga yemushandirapamwe wekuchera 3,000m, kuwedzera kune 19,161m yatocherwa muna2017 na2018.
Tsime rakagadzirirwa kuyedza padyo-pevhu oxide mineralization padanho reCarlotta uye yepamusoro-giredhi yakadzama sulfide mineralization padhiri reDiva.
Rio Tinto Mining uye Kuongorora kuri kuita iyo US $ 15mn greenfield chirongwa muTacna dunhu 4,200m pamusoro pegungwa.
Iyo kambani inoronga kuboora 104 maburi ekutsvaga.
Chishandiso chekuchengetedza nharaunda chakatenderwa, asi kambani haisati yakumbira mvumo yekutanga kuongorora.
Iyi US $ 10mn greenfield chirongwa muCaravelí dunhu chinoshandiswa neCompañía Minera Mohicano.
Iyo kambani inotsvaga kuona iyo ine mineralized muviri uye kuyera zvicherwa zvakachengetwa.
Muna Kurume 2019, kambani yakazivisa kutanga kwezviitiko zvekutsvaga.
Inowanikwa kumabvazuva kwenzvimbo yeAndes, iyi US $ 8mn greenfield chirongwa muApurímac dunhu rinoshandiswa Sumitomo Metal Mining.
Iyo kambani inoronga kuchera madhaimani uye mabhureki ekuongorora pamusoro pe32,000m, nekuitwa kwemapuratifomu, migero, matsime uye zvivakwa zvekubatsira.
Kubvunzana kwekutanga kwapera uye chishandiso chekuchengetedza zvakatipoteredza chakatenderwa.
MunaNdira 2020, kambani yakakumbira mvumo yekutsvaga, iri pasi pekuongororwa.
Mufananidzo wechikwereti: Mines uye hushumiri hwesimba
Post nguva: Chivabvu-18-2021
TDS (Iyo Drill Chitoro) inonyatso kuzivikanwa mumvura tsime drill rig, blasting hole drill rig, air compressor, DTH maturusi, pamusoro sando maturusi, rotary maturusi, RC maturusi, casing system uye HDD maturusi, nezvimwe. Tiri kushandira iyo yekuchera indasitiri. mune zvekuchera, kuchera, kuvaka injinjini uye kuvaka kwezvivakwa
Beijing Iyo Drill Chitoro Machinery Equipment Co., Ltd.
Mvura Well Drilling Rig Machine, Rori Yakakwira Mvura Tsime Kuchera Rig, Dth Nyundo Bit Mutengo, 6 Dth Nyundo, Hydraulic Mvura Tsime Kuchera Rig, Dhiziri Mhepo Compressor,